सावधान ! हतारमा पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ | Ratopati
सावधान ! हतारमा पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ
personमाया श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeभदौ १५, २०७७ chat_bubble_outline0
पीसीआर परीक्षण गर्दा कस्तो—कस्तो अवस्थामा फल्स रिजल्ट आउन सक्छ ?
नेगेटिभ आउने भन्ने कुरा पत्ता लगाउने किटको क्षमतामा भर पर्छ । अहिले विभिन्न अनुसन्धानहरुले के भन्छ भने झण्डै–झण्डै ६७/७० प्रतिशतको हाराहरीमा आरटी पीसीआरले रिजल्ट देखाउने क्षमता हुन्छ । करिब तीस प्रतिशत टेष्ट फल्स देखाउने सम्भावना हुन्छ ।
यसको अर्थ के हो भने परीक्षण गरिएका झण्डै एक सयजनामध्ये तीसजनाको रिजल्ट फल्स देखाउन सक्छ । यसमा व्यक्तिको शरीरमा भाइरसको लोड कति छ, स्याम्पल लिँदा कसरी लिइयो, नमुना स्याम्पललाई परीक्षण गर्ने स्थानसम्म कसरी पु-याइयो, स्याम्पल लिएदेखि नतिजा आउने बेलासम्म कहिलेकाहीँ मानवीय गल्ती पनि हुन सक्ने जस्ता पक्षहरुले पनि भूमिका खेल्छ ।
त्यसैगरी, पीसीआर गर्दा कहिलेकाहीँ प्राविधिक गल्ती पनि हुन सक्छ । यी सबै कुराले अन्तिम रिजल्ट आउँदा ठुलो प्रभाव पर्छ । यी सबै कुरा मिल्यो भने रिजल्ट सही आयो । स्याम्पल परीक्षण गर्दा १०० प्रतिशत पूर्णरूपमा प्रक्रिया पु-याएर काम गरेको खण्डमा पनि ६७ देखि ७० प्रतिशतमात्रै सही रिजल्ट आउँछ । त्यसैले ७० प्रतिशत सही तथ्य पत्ता लगाउने यसको क्षमता भएको अनुसन्धानहरूले देखाएको छ । नियमहरू पालना नगरेको खण्डमा त्योभन्दा पनि कम प्रतिशतको रुपमा रिजल्ट आउन सक्छ ।
कोरोनाको लक्षण देखापरेर पीसीआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ नतिजा आउने तर लक्षण देखिन छाडेपछि पुनः परीक्षण गर्दा पोजेटिभ नतिजा आएको घटनाहरू पनि पाइन्छ, के पीसीआरको गड्बडीले यस्तो भएको हो ?
कोरोनाको लक्षण देखापरेर पीसीआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ नतिजा आउने तर लक्षण देखिन छाडेपछि पुनः परीक्षण गर्दा पोजेटिभ नतिजा आउने नहोला भन्न त सकिदैंन । शरीरमा भाइरसको लोड कम हुँदा स्वाब संकलन गरिएको छ भने वा राम्रोसँग स्वाब संकलन गरिएन भने वा जाँच गर्ने क्रममा सामान्य गल्ती हुँदा पनि अपवादमा त्यस्तो हुन सक्छ ।
कोरोना निको भइसकेपछि शरीरमा कति समय भाइरस बस्छ ?
कोरोना निको भइसकेपछि शरीरमा कति समयसम्म भाइरस रहन सक्छ भन्नेबारे अनुसन्धानहरूले ठ्याक्कै निक्र्यौल गर्न सकेको छैन । शरीरमा कोरोना संक्रमण भएर पनि निको भइसकेपछि भाइरस सक्रिय रहँदैन भन्ने कुरा अनुसन्धानले देखाइसकेको छ । तर कहीलेकाहीँ शरीरमा भएको भाइरसको पार्टीकललाई पीसीआरले समात्ने खालको नभएमा अपवादको रुपमा देखाउन सक्छ । तर त्यो भाइरस शरीरमा सक्रिय खालको हुँदैन ।
कोरोना संक्रमित व्यक्ति निको भएपछि पुनः केही समयपछि त्यही व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएको पाइएको छ, कोरोनालाई एकपटक जितिसकेपछि पनि ढुक्क हुन नसकिने रहेछ, हैन त ?
पुनः कोरोना संक्रमित भएको कुरा वर्तमान समयमा संसारभर नै चासोको विषय बनेको छ । एक पटक संक्रमण भएर निको भएपछि कसैलाई फेरि कोरोना संक्रमण किन हुन्छ भन्ने बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अध्ययन गरिरहेको छ । किनभने सबैमा त्यस्तो देखिएको छैन । कोरोना संक्रमण भएर निको भएका व्यक्तिलाई पुनः संक्रमण भएको निकै थोरै घटना छन् । त्यसैले यस विषयले अनुसन्धानको लागि ढोका खोलेको छ ।
अनुमान चाहिँ यसभन्दा अघि नै गरिएको थियो । किनभने हाम्रो शरीरमा यो भाइरसविरुद्ध रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता (एन्टीवडी) दुई—तीन महिनाभन्दा बढी हुँदैन भनेर प्राइमरी अनुसन्धानले भनेको थियो । त्यसपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले त्यसलाई आधार मानेर ढुक्क नहुन भनेको थियो । यस विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान हुँदैछ । त्यसैले हाम्रो लागि पुनः संक्रमण हुन सक्छ है भन्ने संकेत हुन सक्छ ।
पुनः कोरोना संक्रमण कतिलाई हुन्छ, किन हुन्छ भन्ने बारेमा वैज्ञानिकहरू वर्तमान समयमा अनभिज्ञ छन् । अहिलेसम्ममा पुनः कोरोना संक्रमण हुने केश बढेको देखिदैंन । यस विषयलाई भावी दिनहरूमा अनुसन्धानले प्रष्ट पार्ने आशा गरौं ।
नेपालमा लक्षणसहित र लक्षणविहीन गरी दुई थरीका संक्रमित पाइएका छन्, कुन संक्रमितबाट बढी जोखिम हुन्छ ?
कोरोना संक्रमण पक्कै पनि लक्षणविहीनभन्दा लक्षणसहितका संक्रमितबाट जोखिम हुन्छ । लक्षणविहीनले तुलनात्मकरुपमा धेरै कमलाई कोरोना सार्न सक्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर लक्षणविहीन संक्रमित भन्दैमा सावधानी नपनाएको खण्डमा झन् अरुलाई कोरोना फैलिन सक्छ । लक्षणसहित संक्रमितलाई ज्वरो, खोकी, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन्छ । तर लक्षणविहीनमा यस्ता खालमा समस्या नदेखिए पनि कोरोना अरुलाई सर्दैन भन्ने हुँदैन । त्यसैले लक्षणसहित र लक्षणविहीन दुवै थरीले पूर्णरुपमा सावधानी अपनाउनुपर्छ ।